बालिका हत्या प्रकरणमा १९ जना पक्राउ - Malayakhabar
होम पेज देश समाचार बालिका हत्या प्रकरणमा १९ जना पक्राउ
जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. २१ कुर्थाकी ११ वर्षीय वालिका कञ्चनको हत्यामा संलग्न रहेको आंशका प्रहरीले करिव डेढ दर्जन व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरु गरेको छ । आफुलाई अघोरी बाबा भन्नेदेखि सोधपुछको आधारमा करिव १९ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. २१ कुर्था बस्ने विनोद पजियारकी छोरी कञ्चनको शव निर्वस्त्र अवस्थामा शुक्रबार बिहान साढे ११ बजेतिर स्थानीयले दुधमति नदीको छेउम फेला परेको थियो । नदीको पश्चिमपट्टी झाडीमा नग्न अवस्थामा बालिकाको शव देखेपछि कञ्चनको बलात्कार पछि हत्या भएको आंशका गरिएको छ । सो घटनामा प्रहरीले अहिलेसम्म करिव १९ जनालाई पक्रेर अनुसन्धान गरिरहेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता रामेश्वर कार्कीले बताउनुभयो ।
कञ्चन भैँसी चराउन गएको र त्यो बेलादेखि वेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थल नजिकबाट प्रहरीले एउटा कम्बल बरामद गरेको छ । सो कम्बल घटनास्थलभन्दा झण्डै डेढसय मिटर दक्षिण समसानघाटमा बस्ने एक अघोरीबाबाको रहेको बताइएको छ । करिब ४५ वर्षका ती अघोरीबाबा भारतबाट आएर झण्डै एक वर्षदेखि समसान घाटमा बस्दै आएको स्थानीयले बताएका छन् । उनले नशासमेत सेवा गर्ने गरेका छन् । स्थानीयका अनुसार घटनास्थल नजिकै रहेको आँप बगैँचामा लागु औषध सेवन गर्ने युवाहरुको समूहसमेत आउने गरेका थिए । लागु औषध सेवन गर्नेहरुले नै कञ्चनलाई त्यहाँबाट अपहरण गरी बलात्कार गरेर हत्या गरेको हुनसक्ने स्थानीयले अनुमान लगाएका छन् । घटनाबारे अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अघिल्लो लेख मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण असार २४ गते हुने
पछिल्लो लेख कोरोना भाइरसबाट विश्वमा पाँच लाख ३७ हजार भन्दा बढीको मृत्यु